Na manao izany ny tenanao, na miasa amin'ny mpiara-miasa, te hanatitra roa ny torohevitra izay efa nahita tena manampy amin'ny asa manokana. Voalohany, eritrereto araka izay azo atao alohan'ny rakitra efa nangonina. Toa io torohevitra mazava angamba ny mpikaroka zatra nihazakazaka fanandramana, fa dia tena zava-dehibe ho an'ny mpikaroka zatra miara-miasa amin'ny angon-drakitra loharanom-baovao lehibe (jereo ny Toko 2). Miaraka amin'ny angon-drakitra loharano lehibe ny asa ny ankamaroan'ny mitranga rehefa manana ny angon-drakitra, fa fanandramana dia ny mifanohitra amin'izany; indrindra ny asa tokony hitranga eo anatrehanao manangona tahirin-kevitra. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra mba hanery ny tenanao mba hieritreritra tsara momba ny famolavolana sy ny fandinihana dia ny mamorona sy fisoratana anarana ny fanadihadiana drafitra ho an'ny fanandramana. Soa ihany fa maro ny tsara indrindra-fomba fanao ho an'ny fanadihadiana ny fanandramana tahirin-kevitra no formalized an tatitra torolalana, ary ireo toro lalana dia toy ny toerana hanombohana rehefa namorona ny fanadihadiana drafitra (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011) .
Ny faharoa dia tapa-toro-hevitra fa tsy misy andrana dia tsy maintsy tonga lafatra, ary noho izany, dia tokony hiezaka hanao ny mari ny andian-dahatsoratra andrana izay manamafy ny hafa. Aho nandre izany dia voafaritra ho toy ny Armada paik'ady; fa tsy mitady hanorina iray goavana mpiady, mety ho tsara kokoa fanorenana maro ny sambo kely tamin'ny tanjaka mifameno. Ireo karazana fianarana maro-andrana dia mahazatra amin'ny psikolojia, fa izy ireo tsy fahita firy any an-kafa. Soa ihany fa ny vidiny ambany dia ambany ny sasany andrana nomerika mahatonga ireo karazana multi-fanandramana mianatra mora kokoa.
Koa, te hanatitra roa ny toro-hevitra izay tsy dia fahita indrindra ankehitriny fa zava-dehibe noho ny fampianarana nomerika taona fanandramana: mamorona aotra sisim vola tahirin-kevitra sy hanorina ny etika ao amin'ny famolavolana.